विचार – PathivaraOnline
आस्था राउतको एयरपोर्टमा प्रहरीसंग भएको विवादले दुई हप्ता सामाजिक संजाल तात्तियो । आज विहान आस्था प्रहरी सामु आत्मसमर्पण गरेकी छिन् । यहि विषयमा केन्द्रित रहेर नायक तथा निर्माता दिपकराज गिरिले आफुले पनि आस्थाले झैँ प्रहरीबाट दुख पाएको उल्लेख गरेका छन् । दिपकराज गिरिका अनुसार प्रहरीले सधै सबै कलाकारहरुलाई चिन्छन् भन्ने
महिला अधिकारकर्मी तथा चर्चित संचारकर्मी महिला सरु सुनारले पछिल्लो समयमा आफ्नो सामाजिक संजाल मार्फत फेसबुकबाट वैदेशिक रोजगारीको सिलशिलामा विदेश जानी दिदिबहिहरु अर्को देशमा रहने केटाहरुको विस्वासमा परि नजिकिदा केटाहरुले नाजायज फाइदा उठाई उनीहरुको फोटोहरु भिडियोहरु फेक आइडी या युबटुबमा अपलोड गरि ब्यालेकमेल गरेको घटना आफुलाई दिन दिनै आउने गरेको बताएकी
बाबा मेरो केही गल्ती थिएन म आफ्नो बिहे को कार्ड बाड्न हिडेकी थिए ! सधै हिड्ने त्यो बाटो आज नि म साइकल चलाउदै थिए मलाइ पछाडी बाट टिप्परले ठोक्यो म जिउदै थिए बाबा अझै म छु सोचिरहेकाे थिए । बाबा हेर्नू नि मेरो बाबा म जिउदै देखेर फेरि टिप्पर पछाडी
काठमाडौं। पछिल्लो समय सामाजिक संजाल र मिडियामा गायिका आस्था राउत र विमानस्थलमा खटिएकी महिला प्रहरी जवान काण्ड एक किसिमले भाइरल नै भएको छ भन्दा फरक नपर्ला । त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रहरीलाई गरेको व्यवहार र फेसबुक लाइभमार्फत् बोलेको अपाच्य शब्दका कारण आस्था भाइरल मात्रै बनिनन् विवादितसमेत बनिन् । आइतबार गायिका आस्था राउतविरुद्ध
admin January 16, 2020 जीवनशैली, धर्म सँस्कृति, रोचक, विचार	0
महिनावारी हुदा हिन्दु समाजमा मन्दिर प्रवेश नगर्नु भनेको छैन । पर बस्नु भनिन्छ ।यो महिनावारीमा दिएको छुट्टी हो । तिम्रो शरीर बाट रगत जादा तिमि कमजोर हुन्छौ भनेर आराम दिएको छुट्टी हो ।प्राचीन संस्कारको संस्कृती पछाडीको ज्ञान हेर्ने गरौ।महिनावारीमा तिमी कोहि एक भन्दा अपवित्र हुदैनौ । मन्दिर भन्दा पवित्र हुन्छौ
admin January 15, 2020 विचार, समाज, साहित्य	0
एक युवा, जस्को ठुलो घर थियो, हाँसी खुसी परिवार थियो, सुख, सुबिधा सबै थियो, परिपक्क उमेर भएकाले चारै तिर बाट बिहेको लागि कुरा आउँछ, कुल घरानकी एक असल केटि सँग बिबाह पनि हुन्छ, तर उ प्रायस् उदास रहिरहन्थ्यो, दिल खोलेर हाँस्ने रमाईलो गर्ने गर्दैनथ्यो, किनकि बाहिरबाट जे देखिन्थ्यो त्यो पूरा
admin January 12, 2020 पत्रपत्रिका, विचार, समाचार	0
काठमाडौं। संविधानको प्रावधान बमोजिम विभिन्न जाति, समुदायले विभिन्न सरकारी निकायमा आरक्षण सुविधा लिइरहेका छन्। लोक सेवाले कर्मचारी भर्ना गर्दा आरक्षणका आधारमा निश्चित सिट सुरक्षित गर्ने गरेको छ। संविधानमै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अझैसम्म आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य अर्थात् गरीब बाहुन–क्षेत्रीले आरक्षण सुविधा पाउन सकेका छैनन्। संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको
मृ.त्युशैय्यामा रहेका रिहानलाई पत्र
admin January 4, 2020 जीवनशैली, विचार	0
प्रिय रिहान, धेरै धेरै सम्झना एवं प्यार। जब तिमी यो सुन्दर धरतिमा आयौ, हामीआफन्तहरुले खुसीयाली मनायौँ। तिमीलाई काखमा लिँदा मलाई पनि आनन्द आएको थियो। तिम्रो जन्मसँगसँगै न्यौपाने परिवारमा खुसीरुपी चरा भुर्र उडेर आयो र थुपुक्क बस्यो। तर त्यो सुनौला चरा केही क्षणमा नै भुर्र उडेर गयो। तिमी स्वस्थ जन्मिएका थियौ
admin January 3, 2020 जीवनशैली, रोचक, विचार	0
ज्योतिषी दुर्गा प्रसाद भण्डारी । मानीस सबैको मनमा उठ्ने प्रश्न हामि किन जन्मन्छौ अनि किन मर्छौ ? जन्मेको किन होला ? आफै जानी जानी जन्मेको त पक्कै होईन होला ? जन्मको प्रयोजन के होला ? यत्रो दुख दिनुथियो भने किन जन्मेको ? के अर्थ छ यो सुख दुख भोग्नमा ?
admin December 28, 2019 प्रवास, विचार	0
फुर्वा शेर्पा, जापान । नेपाली भएर जन्मिनुको बाध्यता,रहर, देशको अस्थिर राजनैतिक अबस्था, बेरोजगारले भनौँ या युवाहरू विदेशिने क्रेजको कारण मलाई पनि विदेशिन बाध्य बनाएको ५ बर्ष भएछ । थाहै नभइ ५ बर्ष बितेको छ । यो अवधि मलाई अझै वर्ष होइन महिना जस्तो लागिरहेको छ । किनकि ५ वर्षको यत्रो